Home Wararka Ciidamada Dowlada oo howlgalo ka sameeyay degaano ka tirsan Jubbada Hoose
Ciidamada Dowlada oo howlgalo ka sameeyay degaano ka tirsan Jubbada Hoose
Ciidamada Dowlada Federalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa sheegtay in dagaalo iyo duqeymo ka fuliyeen saldhigyo Al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Kaban ee Waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Saraakiil ciidanka oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay 10 kamida ururka Al-shabaab. Sidoo kale ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland ayaa howlgalo ka dhan ah Al-Shabaab waxaa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
Deegaanada howlgalada laga sameeyay ayaa waxaa ka mid ah Hela-shiid ee dhasheeg ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale Ciidanka ayaa burburiyay Saldhigyo ay Al-shabaab Ku leeyihiin galbeedka Hela shiid Ee Dhasheeg.
Weerarka ayaa lagu dilay 2 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab